Wakiilka cusub ee UNSOS oo soo gaaray Muqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Wakiilka cusub ee UNSOS oo soo gaaray Muqdisho
Wakiilka cusub ee UNSOS oo soo gaaray Muqdisho
Wakiilka cusub ee QM u qaabilsan xafiiska UNSOS ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdishu.
Ergayga QM ee Soomaaliya, Michael Keating, Wakiilka Midowga Afrika ee arimaha Soomaaliya, Francisco Caetano Madeira iyo saraakiil kale oo ka tirsan AU-da iyo QM, ayaa kusoo dhaweeyay Muqdisho Ergayga cusub ee dhawaan loo magacaabay Xafiiska Tageerada QM ee Soomaaliya UNSOS, Hubert Price, isgaoo la wareegi doona xilka loo magaaabay.
Danjire Hubert Price, oo u dhashay wadanka Maraykanka ayaa Hawshiisa noqon doonta isku xirka Hawl-gallada wadajirka ah ee QM, Hawl-gallada Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo Ciidamada dowladda Soomaaliya.
Wakiilka ayaa xafiiska kala wareegi doona Danjire Amadu Kamara oo u dhashay wadanka Sinigaal oo sii waday howlaha xafiiska.
“Waxaan rajeynaynaa in Mr Price uu sii wadi doono hawlaha xafiiska UNSOS ee Soomaaliya, waana mas’uul khibrad u leh xoojinta xiriirka wada-shaqeyneed ee QM aanu la leennahay, gaar ahaan dar-dar-gelinta hawsha ciidanka AMISOM,” ayuu yiri Danjire Madeira.
Xafiiska Taageerada QM ee Somalia [UNSOS]. Ayaa waxaa la sameeyay Sannadkii 2015 tii, markaas oo ay dhammaadeen Hawlihii Xafiiskii Qiimeynta Hawl-galka QM ee Somalia.
Wixii xilligaas ka dambeeyay xafiiskan ayaa loo sameeyay inuu gacan ka geysto Taageerada Hawlgalka Midowga Afrika iyo Weliba Xafiiska QM Soomaaliya ee UNSOM.
Halkan ka daawo sawirada soo dhowaynta wakiilka cusub
Previous articleAkhriso xubanaha Aqalka Sare ee Puntland codadka ay ku kala badiyeen
Next articleDowladda oo war ka soo saartay xuriyadda Warbaahinta